Shiinaha dukaan adeeg fulineed iyo wakiil | Sunson
Si fudud layaab fudud u Dukaameysi dalab oo ay la socoto Sunsonexpress. Waxaan ka caawinnaa Dukaamaysiga ganacsatada inay fuliyaan amarrada sida ugu dhakhsaha badan uguna kharash badan sida ugu macquulsan si ay ula kulmaan filashooyinka macaamiishooda.
Soo iibso si aan kala go 'lahayn ula dhex gasho barnaamijkeena si otomaatig u ahaado fulinta iyo maareynta alaabada, taas oo kuu oggolaaneysa inaad diirada saarto iibinta iyo kobcinta meheraddaada - oo aanad ka welwelin fulinta fulinta.
Ku xir Dukaankaaga Shopify-ka iyo barnaamijka fulinta Sunsonexpress dhowr tallaabo oo fudud.
Ku xir dukaankaaga guji badhanka, ka dibna ku soo dejiso amarradaada ilbiriqsiyo. Shaqada gadaal ayaa horeyba adiga looguu qabtay, markaa way fududahay in la bilaabo bilaa baahi loo qabo horumariye leh fudaydkeena API Integration.
Amarka otomaatiga ah
Isla marka amar lagu soo rogo Dukaankaaga Shopify, waxaa si otomaatig ah loogu diraa Sunsonexpress, halkaas oo laga soo qaadi doono, la buuxin doono, lagana rari doono xarunteenna fulineed ee loogu talagalay.
Waxaad kala socon kartaa nidaamka fulinta dalabka adoo adeegsanaya dashboard-kaaga Sunsonexpress - laga bilaabo iibsashada macaamiisha midig ilaa gaarsiinta.
Soo Dukaameysi Degdeg ah
Macaamiishaadu waxay filayaan maraakiib dhaqso badan oo jaban markay wax ka iibsadaan khadka tooska ah.
Waad dooran kartaa Sunsonexpress, adiga oo ku siinaya ikhtiyaarro kala duwan oo qiimo ah iyo xawaareynno gaarsiin ah oo sida ugu fiican ugu habboon baahiyahaaga gaarka ah.
Amarada la helo ka hor 4 galabnimo waqtiga Beijing waa la soo qaadi doonaa oo waa la rari doonaa isla maalintaas!
Isla marka amarka la raro, macluumaadka raadraaca waxaa si otomaatig ah dib loogu riixayaa Dukaankaaga Shopify loona diraa macaamiishaada.
Maareynta alaabada ee Shopify
Lasoco inta kayd ee aad kaheli karto xarumaha fulintooda adoo adeegsanaya nidaamkayaga maaraynta bakhaarka. Faahfaahinta oo dhami waxay ku jirtaa waqtiga dhabta ah waxayna kuu oggolaaneysaa inaad dib u dalbato keydka markii looga baahdo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha.
Soo Bandhigida Waxqabadka Shiinaha
Adeegga Buuxinta Bakhaarka Shiinaha ee Dukaanleyda Iibsada
Dukaan Soo Buuxi Waxyaabaha Qubanaya
Soo Iibso Adeeg Fulin Iyo Kaydinta Bilaashka ah ee Bakhaarrada Bakhaarka Dukaammada
U Dukaan Gaarsii Adeegyada Fulinta Dalka Faransiiska
Dukaan Geli Adeegyada Fulinta ee Jarmalka
U Dukaan Gaarsiinta Adeegyada Fulinta Uk
Soo Dukaan Bixi Adeegyada Fulinta
Soo Iibso Amarka Fulinta
Dukaan Shenzhen oofiya
Iibso Maraakiibta iyo Adeegyada Fulinta Shiinaha ee Dunida oo dhan
Ka Dukaameysi Shixnad Ka Soo Dhoofinta Shiinuhu Shiinaha Ilaa Usa
Dukaan Soo buuxi Bakhaarka Bakhaarka